EKIPAM-PIRENENA “BAREA” : Nahazo tsodrano sy notolorana fanampiana 700 000 000 Ariary
Sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra malagasy no tafiakatra hiatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika na ny Can ny ekipam-pirenena Malagasy. 11 juin 2019
Tonga nanome tsodrano ny ekipan’ny Barean’i Madagasikara teny amin’ny akany Akamasoa, Andralanitra ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina sy ny Minisitry ny fanatanjahan-tena Tinoka Roberto, tamin’ny alahady 09 jona lasa teo. Nankahery manokana ireto ekipam-pirenena malagasy ireto mba hitondra avo ny hambopom-pirenena sy ny lokon’i Madagasikara ny Filoha Andry Rajoelina.
Nankasitrahan’ny Filoham-pirenena ihany koa ny ezaka efa vitan’ireto ekipam-pirenena ireto ary nambarany fa : “zava-dehibe loatra ny fanohanana ny ekipam-pirenena satria sambany nandritra izay niverenan’ny fahaleovantena izay no handray anjara amin’ny Can i Madagasikara.” “Betsaka isika no efa kivy, tsy nanantena intsony ary nilaza fa izany baolina kitra izany dia gisitra foana ny Malagasy… fa ankehitriny dia pejy vaovao no misokatra ho an’ny vahoaka Malagasy ka eto aho dia mitsodrano anareo barea hahaleo hahalasa, hibata ny fandresena satria efa mandresy ny Malagasy ka tsy maintsy mandresy ny ekipam-pirenena Barea.” “Misaotra anareo indrindra indrindra nitondra avo ny hambopom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Nanolotra 700 000 000 Ariary
Ankoatra izay, tsy nitazam-potsiny na niraviravy tanana ny Filoham-pirenena fa tena noporofoiny tokoa ny finiavany hanohana ny mpitia fanatanjahan-tena. Nanolotra fanampiana 700 000 000 Ariary ihany koa ny tenany entin’ny ekipan’ny Barean’i Madagasikara hiatrika ny fifaninanana izay hatao any Ejipta ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay ho avy izao.
“Manana Raiamandreny ianareo hitsinjo anareo, hanome tanana anareo ary indrindra hanampy anareo koa dia atolotro amin’ny anaran’ny vahoaka Malagasy sy ny fitondram-panjakana ny vola”, hoy ny Filoha nanamafy ny finiavany hanohana hatrany ireto ekipam-pirenena ireto. Tonga nanohana ny ekipam-pirenena malagasy niaraka tamin’ny Filoham-pirenena ihany koa ny masoivohon’ny Korea Atsimo ary nanolotra baolina hampiasain’ny Barea amin’ny fanazaran-tena. Ankoatra ireo dia nanambara ihany koa ny Filoha Andry Rajoelina fa hisy « écrans géants » hapetraka amin’ny distrika manerana ny nosy mba hahafahan’ny Malagasy rehetra manaraka ny fizotran’ny lalaon’ny CAN 2019.